Alvaro Morata: "Muuqaalka Wuxuu Ahaa Mid Hore – Taam Buuxa Ayaana U Ahay Kulanka West Brom Ee Caawa"
Thursday August, 16 2018 - 04:09:31
Weeraryahanka Chelsea Alvaro Morata ayaa si dhaqso leh kaga jawaabay dhaleeceynta looga soo jeediyay baraha bulshada kadib markii xaaskiisa ay baraha bulshada soo galisay muuqaal ay qoob ka ciyaar sameynayaan iyadoo ay jirtay in Antonio Conte uu qirtay dhaawaca xidigaan uu ka qabo dhabarka uu ku seegi karo xilli ciyaareedka oo dhan.
Alvaro Morataayaan kasoo muuqan garoomada tan iyo 17-kii January kulan ay kooxdiisa la ciyaartay Norwich City markaas oo casaan la siiyay, waxaana la wariyay inuu xidigaan dhaawac dhanka dhabarka ah qabo.
Macalinka reer talyaani ayaa shirkiisa jaraa’id ee ka hor kulanka West Brom qiray inuusan garan karin inta uu garoomada ka maqnaan karo, isagoo carabka ku adkeeyay inuu maqnaan karo hal maalin, hal bil ama dhamaan xilli ciyaareedka.
Si kastaba muuqaalka lasoo dhigay baraha bulshada waxaa loogu soo jeediyay xidiga reer Spain inuu yahay khiyaanoole isla markaana uu sheegtay dhaawac been ah, qof walbana wuxuu xasuustay dhaawacii beenta ahaa ee Eden Hazard uu sheegtay waqtigii ay damacsanaayeen iney talada ka tuuraan Jose Mourinho.
Alvaro Morata wuu is celin waayay wuxuuna "Comment ama faallo” kasoo dhiibtay muuqaalka ay soo dhigtay xaaskiisa Alice Campello isagoo qiraya inuusan wax dhibaato ah qabin isla markaana uu taam buuxa u yahay kulanak caawa wuxuu yiri: "Muuqaalka waa mid hore, ma ahi dhaawac, waan fiicanahay si aan uga qeyb galo kulanka caawa. dhaleeceyn badan ayaa jirta balse wax dhibaato ah iima ahan”
Alvaro Morata wax gool ah ma dhalin tan iyo maalmahii Boxing Day-ga markaas oo uu gool madax ah dhaliyay kulan ay kooxdiisa guul ka gaartay Brighton and Hove Albion, sidoo kalana saxiixa cusub ee kooxda Olivier Giroud ayaa taam u ah inuu ciyaaro kulanka caawa.
Dhanka kale hadalka Alvaro Morata wuxuu kusoo aadayaa xilli Chelsea ay gali doonto isbuucyo dhib badan waxeyna laba kulan oo xiriir ah u safri doonaan magaalada Manchester halkaas oo ay kula soo ciyaari doonaan United & City sidoo kalana laba jeer ayey wajahi doonaan Barcelona.